LUNGISA IMPAZAMO YOKUPRINTA ISPOOLER 0X800706B9 - ITHAMBILE
Lungisa impazamo yokuPrinta iSpooler 0x800706b9
Ukuba unemicimbi ngePrinta yakho, kuya kufuneka kungenxa yokuba Windows 10 ayikwazi ukunxibelelana nePrinta iSpooler. I-Print Spooler yinkqubo yeWindows enoxanduva lokulawula yonke imisebenzi yokuprinta enxulumene nePrinta yakho. Kuphela ngoncedo loshicilelo lwe-spoiler, unokuqalisa ukushicilela, ukuskena, njl. Ngoku abasebenzisi abakwazi ukusebenzisa iiprinta zabo kwaye xa besiya kwiinkonzo.msc iwindow ukuqala ukuPrinta iinkonzo zeSpooler bajongane nomyalezo wempazamo olandelayo:
IWindows ayinakuqala inkonzo yokuPrinta iSpooler kwiKhompyuter yaseKhaya.
Impazamo 0x800706b9: Akukho zixhobo zoneleyo ziyafumaneka ukugqiba lo msebenzi.
Ngoku uyazi konke malunga nephutha, lixesha lokuba sibone indlela yokulungisa lo mbandela ucaphukisayo. Ke ngaphandle kokuchitha naliphi na ixesha masibone ukuba siyilungisa njani impazamo yokuPrinta iSpooler 0x800706b9 ngoncedo lwesikhokelo sokujongana neengxaki esingezantsi.
Indlela yoku-1: Sebenzisa isixhobo sokuPrinta isiPrinta
Indlela yesi-2: Qalisa ukuPrinta iiSpooler Services
Indlela 4: Ukulungiswa kwerejista
Indlela yesi-5: Cima zonke iifayile kwifolda ye-PRINTERS
Indlela yesi-6: Yenza iAkhawunti yoMsebenzisi eNtsha
uhlaziyo lwenqaku windows 10, uguqulelo 1703 - impazamo 0x80070020
1. Vula iPaneli yokuLawula kwaye ukhangele i-Troubleshooting kwi-Bar yokuKhangela phezulu kwicala lasekunene kwaye nqakraza kwi-Troubleshooting.
2. Okulandelayo, kwi window yasekhohlo, khetha ifestile Jonga zonke.
3. Emva koko, ukusuka Uluhlu lweengxaki zekhompyuter khetha uluhlu Umshicileli.
4. Landela imiyalelo ekwiskrini kwaye vumela iPrinta Troubleshooter ukuba iqhubeke.
5. Qala kabusha iPC yakho, kwaye ube nakho Lungisa impazamo yokuPrinta iSpooler 0x800706b9.
1. Cinezela iWindows Key + R emva koko uchwetheze iinkonzo.msc kwaye ucofe u-Enter.
2. Fumana Shicilela inkonzo yeSpooler kuluhlu kwaye ucofe kuyo kabini.
3. Qinisekisa ukuba uhlobo lokuQala lusetelwe Ngokuzenzekelayo, kwaye inkonzo iyasebenza, emva koko ucofe kwi-Stop kwaye emva koko ucofe ekuqaleni qala inkonzo kwakhona.
4. Cofa Faka, ulandele KULUNGILE.
5. Emva koko, kwakhona zama ukongeza umshicileli kwaye ubone ukuba uyakwazi na Lungisa impazamo yokuPrinta iSpooler 0x800706b9.
4. Phantsi koCoco oluCwangcisiweyo, khetha i Ithebhu yeWindows emva koko qiniseka ukuba ujongisisa ukungagqibeki kwaye unqakraze Hlahlela .
Iwindows 10 inguqulelo ka-1903 iso
cacisa usetyenziso olungagqibekanga windows 10
2. Jonga kuleqhosha lobhaliso lilandelayo:
HKEY_LOCAL_MACHINE INKQUBO CurrentControlSet Iinkonzo Spooler
3. Qinisekisa ukuqaqambisa Spooler isitshixo kwisahlulo sefestile sasekhohlo kwaye nakwifestile yasekunene yewindows ufumane umtya obiziweyo UkuxhomekekaOnService.
4. Cofa kabini kwi UkuxhomekekaOnService umtya kwaye utshintshe ixabiso lawo nge Ukucima i-HTTP kwaye ushiye icandelo le-RPCSS.
5. Cofa Kulungile ukugcina utshintsho kunye nokuvala uMhleli weRegistry.
6. Qalisa kwakhona iPC yakho kwaye ubone ukuba impazamo isonjululwe okanye cha.
ndingayigqithisela ilayisensi yewindows 10 kwenye ikhompyuter
2. Fumana Shicilela iSpooler service emva koko ucofe kuyo kwaye ukhethe Yeka.
3. Ngoku kwi-File Explorer yiya kule folda ilandelayo:
C: Windows system32 spool IINKCUKACHA
Phawula: Iya kucela ukuqhubeka kwaye ucofe kuyo.
Zine. Cima zonke iifayile kwifolda ye-PRINTERS (Hayi ifolda ngokwayo) kwaye uvale yonke into.
5. Phinda uye ku iinkonzo.msc window kunye s Inkonzo yokuPrinta yeSpooler.
6. Qalisa kwakhona iPC yakho kwaye ubone ukuba unako Lungisa impazamo yokuPrinta iSpooler 0x800706b9.
1. Cinezela iWindows Key + ukuvula Useto emva koko ucofe Iiakhawunti.
2.Cofa kwi Usapho nabanye abantu ithebhu kwimenyu yasekhohlo kwaye ucofe Yongeza omnye umntu kule PC phantsi Kwabanye abantu.
3. Cofa, Andinalo ulwazi lomntu lokungena emazantsi.
i-norton ayizukukhupha windows 10
4. Khetha Yongeza umsebenzisi ngaphandle kweakhawunti yeMicrosoft emazantsi.
5. Ngoku chwetheza igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha leakhawunti entsha kwaye ucofe u-Okulandelayo.
Sayina ungene kule akhawunti intsha yomsebenzisi kwaye ubone ukuba iPrinta iyasebenza okanye ayisebenzi. Ukuba uyakwazi ngempumelelo Lungisa impazamo yokuPrinta iSpooler 0x800706b9 Kule akhawunti intsha yomsebenzisi, ingxaki ke yayikwiakhawunti yakho yakudala yomsebenzisi enokuthi yonakale, nokuba kunjalo dlulisa iifayile zakho kule akhawunti kwaye ucime iakhawunti yakudala ukugqibezela inguqulelo yale akhawunti intsha.
Ukulungisa Ayikwazi ukuvula ikhowudi yempazamo yeWindowswallwall 0x80070422
Uyilungisa njani Windows 10 Impazamo yeposi 0x80040154 okanye 0x80c8043e
Lungisa into ethile engalunganga ngelixa uvumelanisa usetyenziso lwemeyile ngaphakathi Windows 10
Lungisa bekukho ingxaki yokuThumela uMyalelo kwiNkqubo
Yiloo nto uphumelele Lungisa impazamo yokuPrinta iSpooler 0x800706b9 kodwa ukuba usenayo nayiphi na imibuzo malunga nale posi zive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lezimvo.
Indawo efanelekileyo yokufunda ii-comics kwi-intanethi mahhala
ukuseta iiwindows 10 besingenakwenza isahlulelo esitsha
ndimisa njani windows 10 hlaziyo lokufaka
windows 10 hlaziya iBluetooth engekho
I-wifi icofa ngokungacwangciswanga windows 10
Inkcazo ephezulu yohlaziyo lomqhubi womsindo
Usebenzisa njani i-usb njengenkunzi yegusha